"25 Ny androko dia faingana noho ny tsimandoa; Lasa ireny ka tsy nahita soa akory. 26 Mihelina tahaka ny lakana faingam-pandeha izy, tahaka ny voromahery mipaoka hanina. 27 Raha hoy izaho: Hanadino ny alaheloko aho, hitsahatra tsy hanjonitra aho ka ho miramirana, 28 Dia mahatsiravina ahy ny fahoriako rehetra; Fantatro fa tsy hataonao ho tsy manan-tsiny aho. 29 Tsy maintsy hatao ho meloka ihany aho, koa nahoana aho no hanasa-tena foana? 30 Na dia mandro amin’ny oram-panala aza aho ka manadio ny tanako amin’ny ranon-davenona, 31 Dia hanitrika ahy any am-pahitra miaraka amin’izay Hianao, ka hataon’ny fitafiako ho zava-betaveta aho. 32 Fa tsy olona tahaka ahy Izy ka ho azoko valiana hifanatrehanay amin’ny fitsarana. 33 Tsy misy mpanelanelana anay Hametraka ny tànany aminay roa tonta. 34 Aoka hanaisotra ny tsorakazony amiko Izy, ary aoka tsy hampahatsiravina ahy ny fampitahorany, 35 Dia hiteny aho ka tsy hatahotra Azy; Fa fantatro fa tsy hatahotra foana aho." Joba 9:25-35
Te hifandahatra amin’Andriamanitra i Joba (35). Tsy azo tanterahina mihitsy anefa izany (32) noho ny ireto antony ireto:
Mandalo sy mielina. Mosesy moa dia nilaza mihitsy hoe fitopolo na valopolo taona ihany ny andron’ny zanak’olombelona (Salamo 90:10). Alahatr’Andriamanitra izy fa tsy mpandahatra. Isan’ny havoitran’i Joba ankoatran’ny maha-mandalo ny olombelona dia ny hafaingan’izany fandalovana izany. Miara-miaiky izany koa isika amin’izao fotoana izao izay hilazan’ny maro hoe: mandeha, mitsoriaka mihitsy izany fotoana izany.
Fanontaniana: Mahay manararaotra ny andro azo anaovan-tsoa (Efesianina 5:15 ; Kolosianina 4:16) ve isika eo anatrehan’izany fandalovana haingana be izany?
Meloka. Anterin’i Paoly rahateo io hoe tsy misy marina na dia iray aza (Rômanina 3:10). N’inon’inona ezaka hataon’ny olombelona (29b) dia tsy hisy hahamarina azy. Jakoba moa dia nilaza hoe rehefa diso amin’ny iray amin’ireo didy ireo dia meloka amin’izy rehetra (Jakoba 2:10). Ny vaovao mahafaly anefa dia misy hirika hanamarinana ny mpanota ihany. Jesosy Kristy no efa nitondra ny sazy noho ny helotsika ary dia izay ao Aminy dia tsy misy fanamelohana mahazo azy intsony (Rômanina 8:1).
Tsy madio. Masina, madio Andriamanitra. Ny loton’ny fahotana anefa dia miraikitra amin’ny olombelona. «Moa mahova ny hodiny va ny Etiopiana, ary ny leoparda va mahova ny sorany?» (Jeremia 13:23a). Soa anefa fa ny ràn’i Jesosy no hahazoantsika famelan-keloka ka andraisantsika fanadiovana amin’ny tsi-fahamarinana rehetra (1 Jaona 1:7).
Fehiny: Tena Vaovao mahafaly ho antsika tokoa Jesosy.